Shirka horumarinta Maaliyadda dalka oo lagu soo gabo gabeynayo Uganda – Radio Muqdisho
Shirka Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasiirada Maaliyadda dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabo gabeeyo magaalda Kampala ee dalka Uganda.
Shirkan horumarinta Maaliyadda dalka oo shalay Kampala uga furamay Wasiirada Maaliyadda dowlad gobaleedyada, maamulka Gobalka Banaadir iyo Wasiirka Maaliyadda ayaa diiradda lagu saaray mideynta sharuucda hagta dhaqaalaha dalka.
“Kampala waxaa nooga furmay shirka horumarinta Maaliyadda Dalka ee Wasaaradaha Maaliyadda Dowlad-Goboleedyada, Maamulka Gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka wada shaqeyneynaa sidii loo mideyn lahaa shuruucda hagta dhaqaalaha Dalkeena, Ummadda Soomaaliyeedna dhammaan uga faa’iidaysato.” ayuu yiri Wasiir Beyle
Wasiirka Maaliyadda ayaa xusay inay ka go’an tahay sidii Wadajir ay u gudan lahaayeen waajibaadka loo igmaday.
Shirka ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabo gabeeyo oo ay ka soo baxaan go’aanno wax ku ool ah oo ku qotoma horumarinta Maaliyadda dalka.